Madaxweynaha Turkiga oo saaka laga sugayo Muqdisho & waddooyin hor leh oo la xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa inuu maanta soo gaaro caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo kasoo ambabaxaya dalka Jabuuti oo habeen hore ilaa xalay ku sugnaa.
Booqashada Erdogan oo qorsheysneyd maalintii jimcah ayaa dib u dhacday kadib markii uu geeriyooday boqorkii Sacuudi Carabiya, Amiir Cabdalla Bin Cabdilcaziiz.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh oo labadii habeen ee lasoo dhaafay ku sugnaa Sacuudiga, isagoo halkaas u tegay tacsida boqorka ayaa la filaa inuu saaka xilli hore yimaado Muqdisho si uu usoo dhaweeyo wafdiga madaxweynaha dalka Turkiga.
Amaanka Muqdisho ayaa saaka la sii adkeeyey, waxaana la xiray Isgoyso ka fog garoonka iyo madaxtooyada, iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay xirnaayeen waddooyinka muhiimka ah ee ay inta badan adeegsadaan mas’uuliyiinta dowladda.
Turkiga ayaa dalka Soomaaliya ka wada mashaariic horumarineed, waxeyna noqoneysaa markii labadaa ee Reccep Tayyip Erdogan uu booqdo Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ku geeriyooday Muqdisho